]Ndị na-emepụta igwe na-emepụta ọgwụ SINOPED
Ụlọ ọrụ ahụ nwere ọganihu pụrụ iche nhazi ngwá ọrụ maka ọgwụ igwe.
Igwe eji akwadebe ihe eji eme ihe
Igwe na-ejuputa Hard&softgel Capsule
Igwe eji apịpịa mbadamba ihe
Igwe eji emeju mmiri mmiri
Igwe na-ejuputa ntụ ntụ
Ime ụlọ dị ọcha
Igwe ihe mkpuchi ihu
Site na ngwa nhazi pụrụ iche dị elu maka igwe ọgwụ, jikọtara ya na teknụzụ na usoro kachasị ọhụrụ na ahịa, anyị na-agba mbọ maka ịdị mma.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Sino Pharmaceutical Equipment Development (sinoped) Co.,Ltd. ugbu a na-arụ ọrụ R&D na mmepụta nke centrifuges na Liaoyang Pharmaceutical Machinery Factory, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-emepụta ọgwụ na steeti mbụ na New China. Anyị nwere ahụmịhe dị ukwuu, na-elekwasị anya na ngwa ahịa ọgwụ maka afọ 50, na-eje ozi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iri puku kwuru iri puku ndị ahịa. Site na ngwa nhazi dị elu raara nye igwe ọgwụ, jikọtara ya na teknụzụ na usoro kachasị ọhụrụ na ahịa, anyị na-agba mbọ maka ịdị mma. Site na otu ọkachamara nke narị otu narị mmadụ, ụdị njikwa zuru oke na-eme ka ndị otu ahụ bụrụ ndị ọkachamara. Mode na-ejikọta R&D, mmepụta, ahịa na ọrụ ọ bụghị naanị na-eme ka ndị ahịa nwee afọ ojuju, kamakwa na-eme ka ha ghara inwe nchekasị.
FLG Fluid Bed Mechiri granulation Linkage Line
]FLG Fluid Bed Mechiri granulation Linkage LineOkwu mmeghe biko rụtụ aka na-esonụhttps://www.alibaba.com/product-detail/China-Pharmaceutical-Fluid-bed-continuous-fluid_60586863855.html?spm=a2747.manage.0.0.149c71d27MPrngUru nke GEA Pharmaceutical Vertical Continuous Fluid Bed dryer na-adabere n'ịnọgide na-adị mgbede na nlọghachi nke ogo ngwaahịa, nke na-egosipụta nguzozi dị mma n'etiti nrụpụta mmepụta na ịdịmma ngwaahịa. N'ime usoro nke mmiri mmiri, ihe ndị ahụ na-ese n'elu ikuku, na elu na kọntaktị zuru oke na ikuku na-ekpo ọkụ, na ihe ndị a na-eri ya nke ọma ma ruo n'ọnọdụ dị mma maka mgbanwe okpomọkụ si otú a na-arụ ọrụ dị elu. Haziri na kwesịrị ekwesị spraying usoro na site n'ihu structural mma, na mmiri bed wee ghọọ a multi-nzube nhazi eweta na jikọtara ọrụ nke ihicha, granulating, ngwọta mkpuchi, na ntụ ntụ dressing.Final ngwaahịa na-emekarị solute granule ozugbo.
ZPW-25 Rotary Effervescent mbadamba pịa
]ZPW Series Tablet Press bụ akpan akpan imewe Effrvescent Tablet, pịa granule n'ime effervescent mbadamba ozugbo. Ịghasa ụdị punches, mgbe quenching&Special nhazi, nwere ike izere Powder Stick na punches irè.Ọ nwere mma mmetụta maka ihe onwunwe na-viscosity, njọ eruba, mfe mmiri mmiri, ịmụta pụrụ iche de-n'ịkpụzi ụzọ, ọtụtụ-eji ahịa ọgwụ na ụlọ ọrụ.
Igwe na-ejuputa NJP 800 Capsule
]Igwe na-ejuputa capsule bụ ihe na-adịghị agbanwe agbanwe na ụdị efere oghere na-ejuputa akụrụngwa capsule na-akpaghị aka. Ọ na-anabata njikarịcha imewe jikọtara njirimara nke ọgwụ ndị China na ihe achọrọ nke GMP, ọ nwere njirimara nke usoro kọmpat, obere olu, mkpọtụ dị ala, usoro ndochi zuru oke, ọtụtụ ọrụ, na-agba ọsọ kwụ ọtọ wdg. Ọ nwere ike mechaa ngagharị na-esote n'otu oge. : nri capsule, nkewa nke capsule, ndochi ntụ, capsule jụrụ, mkpuchi capsule, mkpochapụ capsule na nhicha modul wdg Emebere igwe a maka imezu olu-emepụta na ndabere nke ihe NJP-1200 akpaaka capsule na-ejuputa igwe, ọ na-abawanye na-ebuli usoro na mfe ihicha, ọ na-azọpụta ndị na-eri na manpower maka enterprise chọrọ olu-emepụta
ahaziri Soft Gel Encapsulation Machine na-emepụta Site na China | Sinopd
]HSR-180H / 200H / 250H / 300H usoro softgel mmepụta akara bụ uka mmepụta ngwá na kwesịrị ekwesị ahịa na dị iche iche ikike chọrọ.The akụrụngwa nwere kọmpat Ọdịdị, mfe ọrụ, mfe mmezi, ike ịrụ ọrụ, elu mmepụta na ala oriri. Ọ dabara maka nri, ọgwụ, ịchọ mma, paintball na chemical ụlọ ọrụ.
Igwe na-ebukọ ọnya na katuunu
]JDZ-260 na-aga n'ihu-ụdị elu-ọsọ cartonning igwe bụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị mere, na-ezute GMP ọkọlọtọ. Enwere atụmatụ nke arụmọrụ dị elu, akụrụngwa kwụsiri ike na ikike dị elu, wdg. Ọtụtụ teknụzụ, gụnyere mpịachi akpaka nke mpempe akwụkwọ ahụ.& ibuga, igbe na-akpụ na post pushing unit, wdg izute European& Ụkpụrụ America. Site n'ịdị mma nke ọma na usoro mmegide post na-aga n'ihu, ọ dị mma iji rụọ ọrụ na idobe ya. Na ntụgharị ntụgharị nke mpụta nke 4-indexing okpukpu abụọ nke mbara ala, enwere ike imeghe igbe, ma enwere ngwaọrụ ndị na-emepụta ụzọ ugboro abụọ, n'ihi ya, ọ na-achọpụta na enwere ike ịkwado igbe kpamkpam.N'ime igwe a, a na-ejikọta igwe / ngwa anya / eletriki / pneumatic njikwa n'ime otu, na mgbe ejikọtara ya na igwe ndị ọzọ dakọtara, ọ bụ ahịrị nkwakọ ngwaahịa zuru oke.
Ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa mmiri mmiri akpa akpaaka - SINOPED
]Igwe na-ejuputa mmiri mmiri akpaakagụnyere mgbapụta mmiri mmiri na-ejuputa, akpa akpụ, akara na mbipụta ụbọchịmbukota ọsọ 30 ka 50bags / minOge nnyefe 25daysNọmba nlereanya 320, 420, 520, 620 na 720Ogologo akpa 15cm ruo 35cm
SGGZ-8 2 ndi isi Capping Igbo Mashine Oral Liquid Bottle, Metal Plastic ịghasa Cap ejuputa na Capping Machine
]* Nke a na usoro onu ndochi capping (mpịakọta) igwe-bụ-eji 20/30/50/60 / 100ml karama, metal eri okpu si ndochi, tinye okpu, capping (mpịakọta);* Nke a na usoro igwe ndochi usoro na capping (mpịakọta) usoro a gụnyere incisively na n'ụzọ doro anya, na-ejuputa nkenke elu, ọ dịghị dripping;* Capping (mpịakọta) Ọdịdị bụ anyị ụlọ ọrụ patent strucProfessional SGGZ-8 2 ndi isi Capping Igbo Mashine Oral Liquid Bottle, Metal Plastic ịghasa Cap ejuputa na Capping Machine emepụta tụnyere yiri ngwaahịa na ahịa, na ọ nwere na-enweghị atụ pụtara ìhè uru na okwu nke arụmọrụ, àgwà, anya, wdg, na-arụ a aha ọma na market.Sinoped achikota ntụpọ nke gara aga na ngwaahịa, na nọgidere mma ha. The nkọwa nke Professional SGGZ-8 2 ndi isi Capping Igbo Mashine Oral Liquid Bottle, Metal Plastic ịghasa Cap ejuputa na Capping Machine emepụta nwere ike ahaziri dị ka gị mkpa.ture, capping (mpịakọta) Ezigbo Ọma hụ na àgwà nke nkwakọ.
Ahaziri Clean Room 1 emepụta Site China
]Nke a bụ a dị ọcha ụlọ zuru ọrụ ewu n'okpuru GMP arịrịọ. Turnkey oru ngo. A Cleanroom ma ọ bụ dị ọcha ụlọ ahụ bụ ebe ahụ, a na-eji na n'ichepụta ma ọ bụ nnyocha sayensị, nke nwere a ala ozo nke gburugburu ebe obibi pollutants dị ka ájá, airborne ụmụ nje, aerosol ahụ na chemical vapors. N'ụzọ ziri ezi karị, a cleanroom nwere a na-achịkwa larịị nke contaimination na na-kpọmkwem site na ọnụ ọgụgụ nke ahụ kwa cubic mita na a kwuru kpọmkwem urughuru size. Iji na-enye n'ọnọdụ, ihere ikuku n'èzí a typical mepere emepe na gburugburu ebe obibi nwere 35.000.000 ahụ kwa cubic mita na size nso 0.5um na ibu n'obosara, nke kwekọrọ na ihe ISO9 cleanroom, mgbe ihe ISO1 cleanroom ekwe dịghị ahụ na na size nso na naanị 12 ahụ kwa cubic mita nke 0.3um na nta
N'ime afọ gara aga, anyị enwetala nnukwu ihe n'ihi ezigbo kredit na ọrụ anyị. Anyị na ọtụtụ ndị ahịa eguzobela mmekọrịta azụmahịa ogologo oge na ụfọdụ ndị ahịa anyị si mba ofesi ahọpụtala anyị ka anyị bụrụ ụlọ ọrụ ịzụ ahịa ọgwụ.& ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na China. A na-ebupụ ngwaahịa ngwaahịa anyị na-emepụta ọgwụ n'ọtụtụ mba, dị ka Korea, India, Indonesia, Pakistan, Thailand, Vietnam, Iran, Japan, Denmark, Romania, Bulgaria, Russia, South Africa, Nigeria, USA, Australia, Canada, Argentina. na Chile. E wezụga ígwè na akụrụngwa, anyị na-enye mmepụta ahịrị, tụgharịa isi oru ngo na mara-ụzọ.
Turnket Project Capsule Tablet Factory na Cambodia
]Turnkey Project maka Capsule na mbadamba, gụnyere ime ụlọ dị ọcha, ọgwụgwọ mmiri na mmepụta ike.anyị mere ya na 2020 wee mechie na 2021SINOPED na-enye Nhazi, akụrụngwa akụrụngwa (mpịakọta mbadamba, ndochi capsule, nkwakọ ngwaahịa ọnya, ngwakọta, akwa akwa mmiri mmiri, ọgwụgwọ mmiri, ime ụlọ dị ọcha wdg) na ntinye.Ugbu a factory n'okpuru mmepụta dị ka ọ na-adịkarịndewo ileta !
Igwe na-ejuputa Capsule na Vietnam
]Enwere ike iji ngwá ọrụ ahụ gluo ma mechie capsules siri ike jupụtara na mmiri mmiri, urughuru na ntụ ntụ, wdg, nke mere na ngwaahịa ndị ahụ nwere ike mechie mgbe niile na usoro nkwakọ ngwaahịa, nchekwa na njem njem.Ọ nwere ike igbochi nkwụsị nke volatiledrugs nke ọma, na-abawanye ụba. ndụ shelf nke ọgwụ, ka ọ dị mma nkwụsi ike nke capsules na nchekwa ọgwụ. N'otu oge ahụ, ọ bụkwa mmesi obi ike nke ngwaahịa dị elu maka ụlọ ọrụ ọgwụ na ụlọ ọrụ ngwaahịa ahụike.
Ahịrị nrụpụta mbadamba nri EU
]Nke a bụ ọnụ ụlọ dị ọcha na-arụ ọrụ zuru oke n'okpuru arịrịọ GMP. Turkey oru ngo.Ime ụlọ dị ọcha ma ọ bụ ime ụlọ dị ọcha bụ gburugburu, nke a na-ejikarị eme ihe n'ichepụta ma ọ bụ nyocha sayensị, nke nwere ọkwa dị ala nke mmetọ gburugburu ebe obibi dị ka uzuzu, microbes airborne, aerosol particles na vapors chemical. N'ụzọ ziri ezi karị, ime ụlọ dị ọcha nwere ọkwa mmetọ a na-achịkwa nke akọwapụtara site na ọnụ ọgụgụ nke irighiri ihe kwa cubic mita na nha nha anya akọwapụtara. Iji nye echiche, ikuku ikuku dị n'èzí na mpaghara obodo mepere emepe nwere ihe dị ka 35,000,000 kwa cubic mita na nha nha 0.5um na dayameta buru ibu, kwekọrọ na ụlọ dị ọcha ISO9, ebe ụlọ dị ọcha ISO1 na-enye ohere ọ nweghị ihe ọ bụla na nha nha ahụ naanị. 12 ahụ kwa cubic mita nke 0.3um na obere.
]The uru nke FL Food mezuwo Stevia Sugar Production Line technology nyekwara na ịnọgide na-enwe evenness na nlọghachite nke ngwaahịa mma, nke na-egosipụta ihe ezigbo itule n'etiti mmepụta arụmọrụ na ngwaahịa mma. Na usoro nke fluidization, ihe floats n'elu ikuku, na n'elu na zuru kọntaktị na kpụ ọkụ n'ọnụ na ikuku, na ihe ndị mere na-evenly eated na esịmde ezigbo ala n'ihi na okpomọkụ mgbanwe otú nwere a elu arụmọrụ. Configurated na kwesịrị ekwesị spraying usoro na site n'ihu bughi mma, ọmụmụ bed ahụ na-aghọ a multi-nzube nhazi eweta na jikọtara ọrụ nke ihicha, granulating, ngwọta mkpuchi, na ntụ ntụ dressing.Final ngwaahịa na-emekarị ozugbo solute granule.
Onye nrụpụta igwe na-ere ọgwụ -Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Sino Pharmaceutical Equipment Development (sinoped) Co.,Ltd
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Sino Pharmaceutical Equipment Development (sinoped) Co.,Ltd. bụ nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọkachamara na R&D, mmepụta, ire na ọrụ nke igwe nrụpụta ọgwụ, ọkachamara kachasịOnye nrụpụta igwe na-ere ọgwụ na China, Ọ bụ ihe dị iche iche nke centrifuges, ngwa dị iche iche centrifuge, tube centrifuges, na diski centrifuges. Ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-ahụ maka mmepụta na nhazi nke ngwaahịa ndị dị ka centrifuges ụkwụ atọ. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ọtụtụ ndị injinia dị elu na ndị ọkachamara ọkachamara, ma nwee usoro nlekọta ahụike zuru oke na sayensị. Akụrụngwa arụpụtara na-agbaso ụkpụrụ mba na ụlọ ọrụ. Ọ na-onwem na ọkachamara mgbe-sales ọrụ, zuru ngwaahịa echichi na debugging, na oru ọzụzụ inye ndị ọrụ na ọkachamara akụrụngwa na ọkachamara ọrụ.
Maazị David Hua
]MMADỤ MMADỤ MMADỤ Azụmahịa
]Kpọtụrụ Ahịa na XXXXX